China Die wanamathela lapel pin ifektri nabakhiqizi | Kingtai
I-Die struck pins iyisipho esihle kakhulu sezinhlelo zokuqashelwa kwabasebenzi, impumelelo yezemfundo, ukuziqhenya kweqembu nezinye izikhathi.
Ithimba lethu lezobuciko linolwazi lokwenza umsebenzi wobuciko oyingqayizivele owenziwe ngesandla kusukela ekuqaleni kanye nokudala kabusha ilogo yeqembu, isiqubulo nebheji ngokunemba okuphelele.
Siyisinqumo esingcono kakhulu kuwe uma udinga isethi yamaphinikhodi we-die struck lapel.
Inqubo yokwenza izikhonkwane ze-die struck iyinqubo yendabuko, okuyisinyathelo sokuqala sokudala izinhlobo eziningi zamaphinikhodi angokwezifiso.
Ngokwenza isikhunta sibe ithuluzi elikhethekile, ukulondoloza ukubonakaliswa kwedizayini yakho, futhi ukuyisebenzisela ukungqongqoza (noma ukugxiviza) umklamo wakho kunsimbi eyisisekelo, singenza izingxenye zokugxiviza ezibukhali ezinemininingwane, futhi sithole izikhonkwane zekhwalithi ephezulu.
Isici esiphawuleka kakhulu sephinikhodi yokugcina indawo yayo epholishiwe ephakanyisiwe kanye nengemuva le-concave textured.
Izikhonkwane zethu ze-Lapel zisebenzisa ithusi noma insimbi yesisekelo ngenxa yokuthamba kwayo ukuze kufinyelelwe isitembu sekhwalithi ephezulu. Khetha eyodwa yezinketho zethu eziningi zokucwenga; igolide, ithusi nethusi; nezinye izinketho zokwenza umklamo wakho uhluke.
Engeza itshe lokwenziwa, inombolo yomkhiqizo, noma yiziphi izinketho zethu zokupakisha ukuze udale inaliti ebunjwe kahle njengesipho, ubonge impumelelo, noma ukhumbule unyaka.
Ingabe isikhunta siwufanele umklamo wami? Izikhonkwane zokufa ziyisinqumo esingcono kakhulu, umklamo awufaki umbala we-koqweqwe lwawo noma izithombe eziphrintiwe.
Lezi zikhonkwane zangokwezifiso ngokuvamile zinokubukeka okuhle, kwakudala futhi ziyimiklamo emihle edinga imigqa ehlanzekile, nenhle.
Uma unemibuzo, sicela usithinte noma oda izikhonkwane zangokwezifiso nezinye izinketho zakho!
Uzonquma ukuthi yisiphi isitayela sephinikhodi esifanele umklamo wakho nethimba lethu elinolwazi.
Gcwalisa ifomu lesicelo sekhotheshini elenziwe ngokwezifiso lomkhiqizo futhi unikeze imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka. Ithimba lethu lizoxhumana nawe lungakapheli usuku olu-1 lokusebenza ukuze lixoxe ngesenzo sakho esilandelayo.
Okwedlule: Die casting lapel pin
Olandelayo: Izindondo Zempumelelo
Die wanamathela lapel izikhonkwane
Iphinikhodi yoqweqwe lwawo oluthambile
Ayini amathegi e-NFC